မာလာဝီ နိုင်ငံ၌ သက်တမ်းကုန် COVID-19 AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး ၁၉,၆၁၀ လုံးအား ဖျက်ဆီး - Xinhua News Agency
မာလာဝီ နိုင်ငံ လီလောင်းဝီမြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ သိမ်းဆည်းထားသော စက္ကူဘူးသေတ္တာအား ဖွင့်ဖောက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လီလောင်းဝီ ၊ မေ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO)က သက်တမ်းကုန်ကာကွယ်ဆေးများအား ထိန်းသိမ်းထားရန် နိုင်ငံများအား ပြောကြားထားသော်လည်း မာလာဝီ နိုင်ငံအစိုးရသည် မေ ၁၉ ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော COVID-19 AstraZeneca vaccine ၁၉,၆၁၀ လုံးအား ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မာလာဝီ နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Khumbize Kandodo Chiponda က သက်တမ်းကုန် ကာကွယ်ဆေးများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Khumbize Kandodo Chiponda က ဦးဆောင်၍ သက်တမ်းကုန် ကာကွယ်ဆေးများအား ဖျက်ဆီးခြင်းအခမ်းအနားကို မြို့တော် လီလောင်းဝီမြို့ရှိ Kamuzu ဗဟိုဆေးရုံ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးများ ဖျက်ဆီးရခြင်းသည် မည်သို့သော သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းကိုမျှ ခွင့်မပြုသည့် နိုင်ငံ၏ မူဝါဒနှင်အညီ ဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ဆိုင်ရာ သမ္မတလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ တွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်မှာ မသုံးဘူးဆိုတာ သေချာစေဖို့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရဆိုရင်လဲ မာလာဝီ နိုင်ငံရဲ့ တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်အောက်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေတဲ့ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးကိုမျှ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရင် အသုံးမပြုဘူးဆိုတာ မာလာဝီ နိုင်ငံသားတွေကို တာဝန်ခံမှု ရှိစေဖို့အတွက် လူသိရှင်ကြား ဖျက်ဆီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူကိုမှ သက်တမ်းကုန်ကာကွယ်ဆေးတွေကို ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မာလာဝီ နိုင်ငံသားအားလုံးကို အစိုးရကိုယ်စား ကျွန်မအနေနဲ့ အာမခံပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မာလာဝီ နိုင်ငံအနေဖြင့် လှူဒါန်းမှုမှ ရရှိလာသော သီးသန့်ကုန်စည်လက်ခံရရှိချိန်တွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန် အချိန်တိုတောင်းသဖြင့် ကာကွယ်ဆေးများ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Khumbize Kandodo Chiponda က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မာလာဝီ နိုင်ငံသည် မတ် ၂၆ ရက်တွင် အာဖရိကသမဂ္ဂ(AU)မှ ဧပြီ ၁၃ ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၁၀၂,၀၀၀ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် အားလုံးအသုံးပြုရန် စီမံခဲ့သော်လည်း ကာကွယ်ဆေး ၁၉,၆၁၀ လုံးမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မာလာဝီ နိုင်ငံအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းခြင်းအတွက် အာဖရိကသမဂ္ဂ(AU) ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO) နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရတို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ဆာဟာရသဲကန္တရထဲတွင် တည်ရှိနေသည့် မာလာဝီနိုင်ငံအတွက် သက်ကယ်ဆေးများပင် ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဖော်ပြခဲ့သည်။
မာလာဝီနိုင်ငံသည် COVAX Facility အစီအစဉ်အောက်တွင် WHO ထံမှ ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၃၆၀,၀၀၀ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၅၀,၀၀၀ နှင့် အာဖရိကသမဂ္ဂမှ ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၁၀၂,၀၀၀ စုစုပေါင်း ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၅၁၂,၀၀၀ အား လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုအရ လက်ရှိအချိန်၌ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၃၃၅,၀၀၀ ကျော် ထိုးနှံပြီးစီးမှုနှင့်အတူ ဆက်လက် ထိုးနှံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Malawi destroys 19,610 expired COVID-19 AstraZeneca vaccines
LILONGWE, May 19 (Xinhua) — Malawi government Wednesday destroyed 19,610 expired COVID-19 AstraZeneca vaccines despite WHO’s call for countries to keep the expired vaccines.
Minister of Health, Khumbize Kandodo Chiponda, led the destruction of the expired vaccines atapublic event held at Kamuzu Central Hospital incinerator in the capital Lilongwe in the presence of local and international media.
The minister, who is also co-chairperson for the Presidential Task Force on COVID-19, said the destruction of the vaccines is in line with the country’s policy that does not allow any use of expired health commodities.
“We are destroying the vaccines to ensure that they are not used in the country’s health system. Historically, under the Expanded Immunization Programme of Malawi, no expired vaccine has ever been used. We are destroying publicly in order to stay accountable to Malawians that the vaccines that expired are not being used during the vaccination campaign and, on behalf of the Government, I assure all Malawians that no one will be given an expired COVID-19 vaccine,” she said.
Chiponda added that the vaccines expired because “they were of short shelf life” by the time the country received the particular consignment of the donation.
According to the minister, the country receivedaconsignment of 102,000 vaccines from AU on March 26 with an expiry date of April 13 and the Malawi government managed to use all but the 19,610 vaccines by the date of expiry.
The minister has since thanked the government of India, the AU and WHO for donating the COVID-19 vaccines to Malawi and she has described it as lifesaving gesture to the sub-Saharan country.
Malawi has received 360,000 vaccines from WHO under the COVAX Facility, 50,000 vaccines from India, and 102,000 vaccines from AU, makingatotal of 512,000 vaccines.
The vaccine campaign in Malawi is currently underway with over 335,000 doses administered. Enditem